Xiisad colaadeed oo laga soo sheegayo gobolka Sanaag | KEYDMEDIA ONLINE
Xiisad colaadeed oo laga soo sheegayo gobolka Sanaag
Xiisad colaadeed ayaa laga soo sheegaya deegaano udhaxeeya gobolka Sanaag ee uu muranka ka taagan yahay!
SANAAG, Soomaaliya - Degaanno ka tirsan gobolka Sanaag ayaa laga soo sheegayaa Saansaan-colaadeed oo u dhaxaysa beelo halkaas wada daga kuwaasii maalmihii lasoo dhaafay ka waday dhaqdhaqaaqyo xooggan.
Maamulka Puntland ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dagaalada, waxayna ku baaqeen in la joojiyo colaadda. Afhayeen uhadlay madaxtooyada Puntland ayaa farriin udiray dadka halkaas ka wada dhaqdhaqaaqyada, waxa uuna sidoo kale Maamulka Somaliland ugu baaqay in aysan qeyb ka noqon colaadaha.
"Maamulka Somaliland waxaan ugu baaqeynaa in aysan sii hurin colaada beelaha dirirtu ku dhexmartay deegaanka Shidan ee Gobolka Sanaag" ayuu yiri Afhayeenka, sidoo kale dadka ayuu ugu baaqay in ay nabadda qaataan oo ay joojiyaan colaadda, "Howsha ha loo daayo Odeyaasha dhaqanka ee horay ugu jiray" ayuu yiri Afhayeenka Madaxtooyada Puntland.
Maamulka Somaliland weli kama aysan hadlin colaadaha ku saleysan reeraha ee ka dhacay degaanka Shidan ee gobolka Sanaag.